Inqubomgomo yobumfihlo | Mahhala Ezemidlalo TV
Ayikho ividiyo noma amavidiyo isingethwe kule sayithi. Noma imiphi yale isiqophi ungathola lapha ingase ayithole mahhala kumasayithi afana Justin.tv, Ustream.tv, Selfcast, nabanye abaningi. Phawula esingazethembisi noma isiqinisekiso inkonzo yethu futhi akuzona onesibopho noma yisiphi isenzo umsebenzisi yethu. Asinalwazi ngokubambisana futhi ungaceli ukuba ubambiswano nomunye umnikazi zevidiyo noma yokusakaza inikezwe kwi website yethu. Konke okuqukethwe copyright zabanikazi abafanele.
1.1 Nakuba sakwenza konke okusemandleni ekulungiseleleni indawo yethu, thina ukukwazisa ukuthi ngokomthetho engenakwenzeka ukuba uyisebenzise ngaphandle amaphutha. Ayikho iwaranti inganikelwa ngokuphathelene ukusebenza ngokuqhubeka website yethu futhi singenzi lutho umthwalo uma kwenzeka ngeke obusebenzayo ngenxa amaphutha noma ukulungisa.
1.2 Kufanele uqaphele ukuthi lonke ulwazi olunikezwa besithathu futhi sikhululeke ngokuphelele imisebenti yabo. Nokho thina asikho akhokhe lolu lwazi.
1.3 Okuqukethwe kwi website yethu ethobela umthetho Swedish kodwa sithatha akukho icala nganoma yisiphi non-ukuhambisana nemithetho yendawo efanele kwezinye izindawo.
2. Izixhumanisi nokusuka Iwebhusayithi
2.1 Le webhusayithi kungase kudingeke uxhumano izixhumanisi sites run by besithathu. Singabantu ukukwazisa ukuthi asinayo nokulawula noma kusuka kumawebhusayithi enjalo futhi akuyena obangela Ukwaziswa okunikezwe ephepheni kubo.
3. Ukusetshenziswa kolwazi
3.1 Asibi abanikazi banoma imiphi imininingwane yabantu inikezwe kuwebhusayithi. Ngakho, asibona obangela lokho ngayo. Ungasabalalisa Imininingwane uma zabanikazi yasekuqaleni abanalutho ngokumelene.
Copyright © 2015 freesport-tv.com | Inqubomgomo yobumfihlo